Blog Template Logo Icon ​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Blog Template Logo Icon ​များ
Blog template logo icon ​တွေ​ကို​တော့ ​သိ​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ်။ ​ဝဘ်​ဆိုက်​တစ်​ခု​ရဲ့ Logo ​ဟာ ​၎င်း​ဝဘ်​ဆိုက်​လိပ်​စာ​ရဲ့ ​အ​ရှေ့​မှာ​ရှိ​ပါ​တယ် ... ​ကျွန်​တော် ​အ​ဆင်​သင့်​လုပ်​ထား​ပြီး​သား logo ​လေး​များ​ကို ​ရှာ​ပြီး​တော့ share ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ...
Logo ​ကို web ​ပေါ်​မ​တင်​ခင် http://www.fileden.com ​မှာ ​အ​ကောင့်​လုပ်​ထား​ဖို့ ​တိုက်​တွန်း​ချင်​ပါ​တယ်.
​ဖို​တို​ရှော့​က​တော့ ​မ​ပါ​မ​ဖြစ်​ဆို​သ​လို ​ပါ​မှာ​ပါ .. ​အဲ့​ဒီ့​တော့ Adobe photoshop ​ကို​လဲ install ​လုပ်​ထား​ပါ​လို့​တိုက်​တွန်း​ချင်​ပါ​တယ် ..
​အောက်​မှာ ​အ​ဆင်​သင့်​သုံး​လို့​ရ​အောင် ​ကျွန်​တော် logo ​တွေ​ကို ​ရှယ်​ထား​ပါ​တယ် .. ifile.it ၊ 4shared ​နှင့် mediafire ​က​နေ ​သုံး​နေ​ရာ ​ခွဲ​ပြီး​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် ... ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့​လင့်​က​နေ download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ဖိုင်​က ​သုံး​ဖိုင်​ပါ ..
​ကဲ​အား​လုံး download ​ချ​ပြီး​သွား​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ ​စ​လုပ်​ကြည့်​ရ​အောင်​ဗျာ ...
​ပုံ​နှင့်​တစ်​ဆင့်​ချင်း​ဆီ ​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .. photoshop ​အ​ကြောင်း​နား​လည်​တဲ့​သူ​အ​တွက် ​မ​ခက်​ပေ​မယ့် ​နား​မ​လည်​တဲ့​သူ​တွေ​အ​တွက် ​ခက်​နေ​မှာ​စိုး​လို့ ​တစ်​ဆင့်​ချင်း​ပြ​ထား​တာ​ပါ. ​နှာ​ခေါင်း​မ​ရှုံ့​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး ..
​ကဲ adobe photoshop ​ကို​ဖွင့်​လိုက်​ပါ ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို့​စိတ်​ကြိုက် log ​ရှိ​တဲ့ ​ဖိုင်​လေး​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ ... ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ပုံ​ထဲ​က ​အ​တိုင်း photoshop ​က marquee tool (sh Key = m) ​ကို​နှိပ်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို​ကြိုက်​တဲ့ logo ​လေး​ကို ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​ဖိ​ပြီး​ဆွဲ​လိုက်​ပါ ...
​ပြီး​ရင် ctrl + n (new) ​ကို​နှိပ်​ပါ ​ပေါ်​လာ​တဲ့​အ​ကွက်​ထဲ​မှာ ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ 32 pixels x 32 pixels ​ဆို​ပြီး​ဖြည့်​ပေး​လိုက်​ပါ ​ပြီး​တာ​နဲ့ enter ​ခေါက်​လိုက်​တာ​နဲ့ file ​အ​သစ်​တစ်​ခု ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​ပေါ်​လာ​တဲ့​ဖိုင်​ထဲ​ကို ​ကို​ကြိုက်​တဲ့ icon ​လေး​ကို ​ဆွဲ​ပြီး​ထည့်​လိုက်​ပါ ...
​ပြီး​တာ​နဲ့ jpeg ​နဲ့ destktop ​မှာ save ​ပေး​လိုက်​ပါ ...
desktop ​မှာ​ရောက်​နေ​တဲ့ ​ဖိုင်​လေး​ကို paint ​နဲ့​ဖွင့်​လိုက်​ပါ .. ​ပြီး​တာ​နဲ့ save as ​လုပ်​လိုက်​ပါ ​ပေါ်​လာ​တဲ့ file name ​နေ​ရာ​မှာ ​တစ်​ခု​ခု​ဖြည့်​ပြီး ​နောက်​က .ico ​နဲ့​သိမ်း​ပေး​ပါ. (example => nyinaymin.ico) ​သိမ်း​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အဲ့​ဒီ့​ဖိုင်​လေး​ကို http://www.fileden.com/ ​မှာ ​သွား​ပြီး upload ​လုပ်​ရ​မှာ​ပါ. ​လုပ်​တတ်​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​မ​လုပ်​တတ်​ရင်​လဲ ​ကျွန်​တော် ​နောက်​တစ်​ခါ ​ပို့စ်​တစ်​ပို့စ်​ရေး​ပေး​ပါ​ဦး​မယ်။ ​ရ​လာ​တဲ့​လင့်​ကို http://​ဘာ​ညာ​သာ​ရ​ကာ/ ​ဆို​ပြီး​ရှိ​တဲ့​နေ​ရာ​လေး​ကို​ပဲ copy ​ကူး​မှာ​ပါ.. ​နောက်​က ​ပါ​လာ​တဲ့ ​ကုတ်​တွေ​ကို ​မ​ကူး​ပါ​ဘူး။ http://www.fileden.com/files/2008/10/10/2137481/nyinaymin.ico ​အဲ့​ဒီ့​လို​လေး​ရ​လာ​မှာ​ပါ . ​မ​သေ​ချာ​ဘူး​ဆို​ရင် address bar ​မှာ ​ရိုက်​ပြီး​တော့​ကြည့်​လိုက်​ပါ .. icon ​ပုံ​လေး​ပေါ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​အဲ့​ဒီ့​လင့်​လေး​ရ​လာ​အောင် ​အောက်​ပါ​ပုံ​အ​တိုင်း ​ယူ​လိုက်​ပါ
​ရ​လာ​တဲ့​ဖိုင်​လေး​ကို http://www.fileden.com ​မှာ​တင်​လိုက်​ပါ .. ​တင်​လိုက်​လို့​ရ​လာ​တဲ့ ​လင့်​လေး​ကို ​အောက်​က ​အ​နီ​ရောင်​စာ​သား ​နေ​ရာ​မှာ ​ဖြည့်​ရ​မှာ​ပါ.
k2tmaung October 8, 2009 at 6:44 AM
​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်... ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ... ​ခု​မှ ​သိ​လို့...:P
SvP February 17, 2011 at 5:42 AM
​အ​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော် ​လုပ်​တာ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် .. ​အဲ့​ဒါ​ဘာ​လို​နေ​တယ်​မ​သိ​ဘူး ​အ​ကို
T@N Y@W Z!N KG L@Y ! August 3, 2012 at 5:29 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ဘူး​ခင်​ဗျ ​တစ်​ချက်​လောက်​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ . . .